Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Oo Beledweyne Kula Kulmay Saraakiil Ka Tirsan UN-ka – PuntlandNews24
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Oo Beledweyne Kula Kulmay Saraakiil Ka Tirsan UN-ka
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa magaalada Beledweyne kulan kula qaatay, Xubno ka tirsan Qaramada Midoobay, iyadoo madaxweynaha uu kala hadlay arrimo kale duwan oo La xiriira wax ka qabashada baahiyaha ka jira deegaanada Hirshabelle.
Kulanka ayaa waxaa madaxweynaha Ku wehlinayay qaar ka mid ah Golaha Wasiirada Hirshabelle, waxaana kulanka uu Ku bilowday isbarasho Wasiirada Hirshabelle Iyo Saraakiisha Qaramada Midoobay, iyagoo balanqaaday in ay La shaqeyn doonaan Xukuumadda Cusub Ee maamulka.
Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa sidoo kale ka dalbaday Saraakiishani UN-ka inta kulankooda ay Ku guda jireen, in ay si Dhow ula shaqeeyaan Hey’adaha Dowladda Hirshabelle kaalina ay ka qaataan, sidii loo tayeyn lahaa.
Intaasi kaddib ayaa Saraakiisha Qaramada Midoobay waxa ay soo dhoweeyeen Wasiirada Cusub ee Dowladda Hirshabeelle, waxaana ay balanqaadeen in Dowladda Hirshabelle ay si wanaagsan ula shaqeyn doonaan, ayna u qorsheysantahay dhowaan in ay mashaariicyo ay ka fuliyaan
Degmooyinka Hirshabelle sida Jowhar Iyo Degmada Jalalaqsi, waxaana ay sheegeen in ay socdaal Ku tagi doonaan Magaalada Jowhar mar dhow.
Maalin kaddib oo maalinta arbacada ah ayuu qorshuhu yahay mar kale in Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble, Iyo Qaramada Midoobay in kulan midkan ka balaaran ay kulmaan islamarkaana ay kaga wada hadlaan dar dargalinta dib u dhiska Iyo horumarinta Hirshabeelle, Iyo sidii loo caawin lahaa dadka abaaraha La daalaa dhacaya.
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo xafiiskiisa ku Qaabilay Wefti ka Socdey bangiga Aduunka (World Bank ).
Tacsi:Madaxweynaha Puntland oo Ka Tacsiyeeyey Sadex Sarkaal oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee DPL oo shil gaari ku geeriyoodey.